ESI ESI TINYE FLASH PLAYER MAKA GAM AKPORO - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi esi tinye Flash Player maka gam akporo
Otu n'ime nsogbu ndị a na-ahụkarị na ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị na-agba ọsọ gam akporo bụ ntinye nke ọkpụkpọ ọkụ, nke ga-ekwe ka igwu flash na saịtị dị iche iche. Ajụjụ nke ebe ibudata na ịwụnye Flash Player ghọrọ ihe dị mkpa mgbe nkwado maka nkà na ụzụ a lara n'iyi na Android - ugbu a, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ngwa mgbakwunye Flash maka sistemụ arụmọrụ a na ebe nrụọrụ weebụ Adobe, nakwa na ụlọ ahịa Google Play, mana ụzọ iji wụnye ya ka dị n'ebe ahụ.
Na ntuziaka a (emelitere na 2016) - nkọwa gbasara otu esi ebudata ma wụnye Flash Player na gam akporo 5, 6 ma ọ bụ gam akporo 4.4.4 ma mee ka ọ rụọ ọrụ mgbe ị na-egwu vidiyo ma ọ bụ egwuregwu vidiyo, yana ụfọdụ nuances nke nrụnye na arụmọrụ ngwa mgbakwunye na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo. Hụkwa: Ọ bụghị egosi vidiyo na gam akporo.
Ịwụnye Flash Player na gam akporo ma rụọ ọrụ mgbakwunye na ihe nchọgharị ahụ
Usoro mbụ na-enye gị ohere ịwụnye Flash na gam akporo 4.4.4, 5 na Android 6, na-eji naanị isi mmalite ndị isi mmalite na, ma eleghị anya, bụ ihe kachasị mfe na nke kachasị mma.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata Flash Player apk na nsonaazụ ọhụrụ ya maka gam akporo site na ebe nrụọrụ weebụ Adobe. Iji mee nke a, gaa na nsụgharị nke ihe mgbakwunye //helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html page wee chọta Flash Player maka gam akporo 4 ngalaba na listi na ibudata topmost instance of apk (version 11.1) site na ndepụta.
Tupu echichi, ị kwesiri ịme ka nhọrọ nke ịwụnye ngwa sitere na isi mmalite (abụghị site na Ụlọ Ahịa Play) na mpaghara "Nche" nke ntọala ngwaọrụ.
A ghaghị itinye faịlụ a ebudatara na enweghị nsogbu ọ bụla, ihe kwekọrọ na ya ga-apụta na listi ngwa ngwa Android, ma ọ gaghị arụ ọrụ - ịkwesịrị ihe nchọgharị na-akwado plug-in Flash.
Site na oge a na n'ihu nchọgharị - nke a bụ Dolphin Nchọgharị, nke nwere ike arụnyere si Play Market site na ukara na peeji nke - Dolphin Nchọgharị
Mgbe ị wụnye ihe nchọgharị, gaa na ntọala ya ma lelee ihe abụọ:
A ghaghị ịgbanye Jetpack Dolphin na ngalaba ntọala.
Na "Ngalaba Ntanetịime", pịa "Flash Player" ma mee ka uru dị na "Mgbe niile".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịnwa ịmepe ọ bụla maka ule Flash na gam akporo, maka m, na android 6 (Nexus 5) ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Site na Dolphin, ị nwere ike imeghe ma gbanwee ntọala Flash maka gam akporo (nke a na-akpọ site n'ịgbanye ngwa kwekọrọ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba).
Rịba ama: dị ka ụfọdụ nyochaa, Flash apk sitere na ebe nrụọrụ weebụ Adobe nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na ngwaọrụ ụfọdụ. Na nke a, ị nwere ike ịnwale ibudata gbanwere Flash ngwa mgbakwunye site na saịtị ahụ. androidsoftdownload.org na mpaghara ngwa ngwa (APK) ma wụnye ya, mgbe ọ wepụchara Adobe plugin. Ihe ndị fọdụrụ ga-abụ otu.
Jiri Igwe Igwe Igwefoto Photon na Nchọgharị
Otu n'ime ndụmọdụ ndị a na-eme mgbe nile maka ịkụ egwu Flash na nke ọhụrụ gam akporo version bụ iji Photon Flash Player na Nchọgharị. N'otu oge ahụ, nyocha na-ekwu na onye na-arụ ọrụ.
N 'ule m, nhọrọ a arụghị ọrụ ma ejikọta ọdịnaya ejikọta na iji ihe nchọgharị a, Otú ọ dị, ị nwere ike ịnwa ibudata mbipute a nke Flash Player site na ibe ọrụ na Ụlọ Ahịa Play - Photon Flash Player and Browser.
Ụzọ dị mfe ma dị mfe iji wụnye Flash Player
Nwelite: N'ụzọ dị mwute, usoro a anaghịzi arụ ọrụ, hụ nbigharị ọzọ na mpaghara na-esote.
N'ozuzu, iji wụnye Adobe Flash Player na gam akporo, ị kwesịrị:
Chọta ebe ibudata mbipute kwesịrị ekwesị maka nhazi gị na os.
Gbaa ọtụtụ ntọala
Site n'ụzọ, ọ dị mma ịkọwa na usoro ahụ a kọwara na mbụ metụtara ụfọdụ ihe ize ndụ: ebe ọ bụ na ewepụrụ Adobe Flash Player site na ụlọ ahịa Google, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ zoro ụdị ụdị nje na malware ndị nwere ike izipu SMS akwụ ụgwọ site na ngwaọrụ ma ọ bụ mee ihe ọzọ abụghị ezigbo obi ụtọ. N'ozuzu, maka android android, ana m akwado iji w3bsit3-dns.com iji chọpụta ihe omume dị mkpa, kama ịchọta engines ịchọpụta, na ikpe ikpe a, ị nwere ike ịnweta ihe na-enweghị ezigbo uru.
Otú ọ dị, n'oge edere ndu a, achọpụtara m ngwa dị na Google Play nke na-enye gị ohere ịmepụta usoro a ngwa ngwa (na, o doro anya, ngwa ahụ gosipụtara taa - nke a bụ ihe mgbagwoju anya). Ịnwere ike ibudata Flash Player Tinye ngwa site na njikọ (njikọ ejighi arụ ọrụ, enwere ozi dị n'isiokwu dị n'okpuru, ebe ọzọ iji budata Flash) //play.google.com/store/apps/details?id=com.TkBilisim.flashplayer.
Mgbe echichi, na-agba Flash Player Wụnye, ngwa ga-akpacha aka ịchọpụta ụdị mbipute nke Flash Player achọrọ maka ngwaọrụ gị ma kwe ka ị budata ma wụnye ya. Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịlele vidiyo Flash na FLV na ihe nchọgharị, kpọọ egwuregwu flash na iji ihe ndị ọzọ chọrọ Adobe Flash Player.
Maka ngwa na-arụ ọrụ, ị ga-achọ iji ohere nke amaghi ama na ntọala ekwentị ma ọ bụ mbadamba - a chọrọ ka a ghara ịme ihe omume ahụ n'onwe ya, dịka ịwụnye Flash Player, ebe, n'ezie, ọ bụghị ibudata na Google Play, ọ bụghị nanị .
Tụkwasị na nke a, onye edemede nke ngwa ahụ na-ekwu ihe ndị a:
Kasị mma, Flash Player na-arụ ọrụ na Firefox maka gam akporo, nke nwere ike ibudata site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ.
Mgbe ị na-eji ihe nchọgharị a, ị ga-ebu ụzọ kpochapụ faịlụ na kuki niile, mgbe ị wụnye flash, gaa na ntọala ihe nchọgharị ma nye ya aka.
Ebe ibudata APK si Adobe Flash Player maka gam akporo
N'iburu n'uche na nhọrọ ahụ a kọwara n'elu kwụsịrị ịrụ ọrụ, ana m enye njikọ iji kwenye na APKs na flash maka gam akporo 4.1, 4.2 na 4.3 ICS, nke dịkwa mma maka gam akporo 5 na 6.
site na Adobe saịtị na mbipute archive nke Flash (akọwapụtara na akụkụ mbụ nke ntụziaka).
androidsoftdownload.org(na ngalaba APK)
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ụfọdụ nsogbu metụtara Flash Player maka gam akporo na otu esi edozi ha.
Mgbe nkwalite ka Android 4.1 ma ọ bụ 4.2, Flash Player kwụsịrị ịrụ ọrụ
N'okwu a, tupu ịmee nrụnye dịka akọwara n'elu, buru ụzọ wepu usoro Flash Player dị ugbu a, na mgbe nke ahụ gasịrị, ịmepụta ya.
Ejiri ihe ngosi vidiyo, ma vidiyo na ọdịnaya ọkụ ndị ọzọ ka egosighi.
Echere m na usoro a ga - enyere gị aka nweta nzaghachi nke ọdịnaya Flash na ngwaọrụ ahụ.